Global Voices teny Malagasy » Mitarika any amin’ny fampiharana ny fomba tandrefana ve ny fanentanana amin’ny mediam-baovao? · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 06 Jona 2019 4:32 GMT 1	 · Mpanoratra David Sasaki Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Mora kokoa ny mitsikera noho ny mandray anjara ary iray amin'ireo fanakianana izay renay matetika ao amin'ny Rising Voices ny hoe tsy maintsy hitarika any amin'ny fampiharana ny fomba tandrefana ny fanampiana ireo vondrom-piarahamonina zara raha fantatra mba ho tafiditra amin'ny resadresaka manerantany amin'ny aterineto. Niresaka ity fanontaniana ity i Álvaro Ramírez sy Diego Gomez, mpiara-manorina ny tetikasa HiperBarrio tamin'izy ireo tany Aotrisy teo ampakana ny lokan'izy ireo Golden Nica .
Ohatra tsara amin'ny zava-mitranga amin'ny lafiny iray … ny fomba nahazoan'i Cati Restrepo namana tamin'ny alalan'ny fianarana ny teny Anglisy tao amin'ny LiveMocha . Ary nilaza tamiko izy indray alina fa manana namana tsara indrindra any Pakistana amin'izao fotoana izao izy ary miresaka be izy ireo, mampihatra ny teny Anglisy izy roa ary nanana fitarihana ity namana ity indrindra izy. Satria tsy mety takany hoe misy vehivavy toa azy mivoaka matetika, mibilaogy ary tsy mivavaka amin'ny fotoana rehetra … ahoana no ahafahany milalao lokanga, izay fitaovana tsy ara-pivavahana. Ka mahasarika ny hafa, any amin'ny faritra hafa amin'izao tontolo izao tokoa izy. Ary voataonany ihany koa izy. Milaza azy momba ny kolontsaina Silamo sy ny fomba fivavaka izy. Noho izany dia nianatra tamin'ity lehilahy ity koa i Cati.
Noho izany dia heveriko fa mahaliana tokoa izany heviny izany satria tsy voatery hifandray amin'ny olo-malaza lehibe koa izy ireo. Ankehitriny dia mifandray amin'ny olon-tsotra izy ireo. Heveriko fa ao anatin'ity tetikasa ity indrindra, tsy voasariky ny Amerikana ihany izy ireo fa manomboka mieritreritra momba an'i India, Dubai, ary kolontsaina hafa izay tsy fantany taloha. Na tsy dia fantampatany loatra. Miaraka amin'ireo lehilahy ao amin'ny Voces Bolivianas indraindray. Farafaharatsiny, mamaky ny Foko Madagascar  koa izy ireo. Mahafantatra ny zava-mitranga ao Bangladesh  izy ireo. Henon-dry zareo ireo mihira. Tsy azontsika tsara izany, fa mihevitra isika fa tsara ny fomba fihiran'izy ireo any Bangladesh. Ary ity sy inday izany. Ary mieritreritra aho fa manapa-kevitra izy ireo. Afaka manapa-kevitra bebe kokoa izy ireo ankehitriny. Talohan'ny fahitalavitra lehibe sy ireo orinasa lehibe … izy ireo no nanapa-kevitra ny amin'izay tokony ho renesina any Kolombia. Ary ankehitriny, manana fomba fisafidianana ny ankizy ary afaka misafidy izy ireo.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/06/06/139392/
 ampakana ny lokan'izy ireo Golden Nica: https://rising.globalvoicesonline.org/blog/2009/09/10/hiperbarrio-receives-the-golden-nica-2009-in-linz-austria/
 Cati Restrepo : http://catirestrepo.wordpress.com/
 Voces Bolivianas : http://boliviadigital.org/
 zava-mitranga ao Bangladesh: http://narijibon.blogspot.com/